WHO: “Wararka been abuurka ayaa caqabad ku noqday la dagaallanka coronavirus” | Xaysimo
Home War WHO: “Wararka been abuurka ayaa caqabad ku noqday la dagaallanka coronavirus”
WHO: “Wararka been abuurka ayaa caqabad ku noqday la dagaallanka coronavirus”
Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay in wararka been abuurka iyo xogaha khaldan ee la isla dhexmarayo ay caqabad ku noqdaan jawaab ka bixinta cudurkan cusub ee coronavirus.
Agaasimaha guud ee hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa warfidiyeennada u sheegay wararkaasi been abuurka iney saameeyeen shaqaalaheenna har iyo habeen ku howlan xal u helista cudurkan.
Dhimashada Dr Li Wenliang, waxay cara ka abuurtay dalka Shiinaha
Dr Tedros wuxuu intaa ku daray cudurka inuu dalka Shiinaha oo keli ah uu ku haleelay 34,598 qof, ku dhawaad 25,000 oo dadkaasi ka mid ahna ay yihiin kuwa ku nool gobolka Hubei, ee dalka Shiinaha, gobolkaasi oo ah halki ugu horreeyey oo cudurka cusub uu ka dillaacay.
“Waxaa kale oo aan doonayaa inaan si tifatiran uga hadlo muhiimadda ay leeyihiin xogaha rasmiga ah, Shacabkuna waa iney helaan fursad ay ku heli karaan xogaha dhabta ah ee la xidhiidha sida uu qofka isaga ilaalin karo cudurkan iwm” ayuu yiri.
“Hay’adda WHO ahaan lama dagaallameyno oo keli ah caabuqa corona, balse waxay sida oo kale la dagaallameysay wararka been abuurka ah ee caqabadda ku noqon kara mas’uuliyadda na saaran.
Dr Li wuxuu sawirkiisa baraha bulshada soo dhigay isagoo saaran sariirta isbitaalka
Booliska ayaa markaas ka dib ku booqday gurigiisa waxayna ku amreen inuu joojiyo digniintaas, maadaama ay mas’uuliyiintu doonayeen in la qariyo warka ku saabsan caabuqaas cusub.
Afar maalmood kaddib waxaa u tagay mas’uuliyiin ka socday xafiiska sirdoonka bulshada iyaga u sheegay inuu saxiixo warqad ay sideen. Waxaana warqadda inuu saxiixa laga dalbaday lagu soo eedeeyey “Inuu warar been abuur ah oo khaldan faafinayay” taasoo wax u dhintay “xasiloonida bulshada”.
“Waxaan kaaga digeynaa: haddii aad ku sii socota bulshada inaad marin habaabiso, dhaqan xumida iyo inaad falkan sharci darrada ku sii socoto in caddaaladda lagu horgeynayo ma fahantay? Warqadda qaybteeda hoosana Dr Li ayaa ku qoray “Haa, waxa aad iga dalbateen waan sameeynayaa.”
Wuxuu Dr Li ka mid yahay siddeed qof oo ay booliska baaritaan ku sameeyeen oo ay ku eedeeyeen “iney baahiyeen warar aan jirin”.
Markii uu 10-kii January warqadda soo dhigay bartiisa Weibo wuxuu billaabay inuu qufaco, maalintii xigtayna xummad ayaa qabatay, laba maalin kaddibna isbitaalka ayaa la dhigay. Sidoo kale waalidiintiisa oo iyaguna bukooday waxaa la dhigay isbitaalka.
30-kii bishii January wuxuu mar kale baahiyey farriin: “Baaritaan kale oo lagu sameeyey ayaa lagu ogaaday inuu cudurkii uu markii ugu horreysay ka digayay haleeyay, kaddibna sidaa ayaa dawo loogu billaabay.”